Umfazi oshishino lokhenketho waseZambia ufumene amabhaso awaziwayo eIndiya
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Awards » Umfazi oshishino lokhenketho waseZambia ufumene amabhaso awaziwayo eIndiya
Awards • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zaseIndiya eziQhekezayo • iindaba • abantu • Tourism • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo • Iindaba zaseZambia eziQhekezayo
Ukhenketho lwaseZambia Usomashishini uTecla Ngwenya uqokelele iMbasa yowama-2020 yabafazi abaphumeleleyo ngokuthatha inxaxheba nokugqwesa kwezokhenketho nakumzi-mveliso wokubuk 'iindwendwe.
Umfazi ongusomashishini waseZambia ufumene iMbasa yeNkokheli yaBaseTyhini yeHlabathi kumsitho obubanjelwe eMumbai, eIndiya, kwiintsuku nje ezimbalwa ezidlulileyo.
UMkomishinala oPhezulu waseZambia e-India, u-Judith Kapijimpanga, uthe uGqirha Ngwenya ubonakalisile ukuba ngumzekelo ophumeleleyo kwishishini lokubuka iindwendwe kwaye wamkelwa kwihlabathi liphela.
UGqirha Ngwenya unikwe iwonga leminyaka eli-19 yokugqwesa kushishino lokubuka iindwendwe kunye nokuthatha inxaxheba ebonakalayo kushishino lwezokhenketho eZambia.
Kumyalezo othunyelwe eluntwini ovela kwiKhomishini ePhakamileyo yaseZambia eIndiya, uMkomishinala oPhezulu waseZambia eIndiya uthe uGqirha Ngwenya ubelilungu elibalaseleyo kunye noSekela Sihlalo weWomen of Value Africa (WOVA). Ukwalilungu leBhunga lezoKhenketho laseZambia, uMbutho weehotele kunye neCatering yeZambia, phakathi kweminye imibutho yemizi-mveliso yokwamkela iindwendwe. UGqirha Ngwenya nguMlawuli oPhetheyo weTecla Investments Limited enehotele kunye neendawo zokulala ezi-3 eZambia.
Ungomnye weenkokheli zeshishini labasetyhini e-Afrika abafuna utshintsho kumzi-mveliso wezokhenketho kwilizwekazi ophethwe ikakhulu ziinkampani zangaphandle ngaphandle kweAfrika.
Ukukhangela ukuxhotyiswa kwabasetyhini kukhenketho, i-Women of Value Africa (WOVA) ngoku isebenza ngokubambisana noMbutho weZizwe eziManyeneyo wezoKhenketho (i-UNWTO) ukuxhobisa abasetyhini e-Afrika.
I-WOVA ijolise ikakhulu kutshintsho lwamashishini abantu ababhinqileyo kumacandelo ngamacandelo ngokubaluleka kwezokhenketho, ikwasebenzisa ikhonkco lexabiso lezokhenketho lommandla okanye lase-Afrika ukuze kufikelelwe kumathuba kumacandelo ahlukeneyo nakwimizi-mveliso.
I-Women of Value Africa ngumbutho we-PAN wase-Afrika kunye ne-100% yeShishini lezeNtlalontle labasetyhini elibhalisiweyo njengenkampani engenzi nzuzo eMzantsi Afrika. Kwi-2016, i-WOVA iphehlelele umbono we-2020 kunye nangaphaya ngenjongo yokulwa nemiceli mngeni ejongene ne-Women Co-ops kunye nee-SMMEs ngoShishino noPhuhliso lwaBaboneleli.